ACNES – Rohto Myanmar
Acnes C10 (Scars and dark spots treatment with Vitamin C)
VitaminC သည် ရေတွင်လွယ်ကူစွာပျော်ဝင်လွယ်ပြီး အရေပြားတွင်းသို့ လျင်မြန်စွာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်တွင်သာ ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ Vitamin C သည် ဓါတ်လျော့လွယ်သောအာနိသင်ရှိသည်။ သို့သော် Rohto Mentholatum မှ အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့် တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသော C 10 တွင် Vitamin C ကို ၁၀% အထိ Stable ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ဖော်စပ်ထားပြီး epidermis အလွှာထိ လျင်မြန်စွာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သော အာနိသင်ရှိခြင်းကြောင့် အမဲစက်အမာရွတ်များကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ကုသပေးနိုင်သည်။ Acnes C10 တွင်ပါဝင်သော Vitamin C ၏အာနိသင်များမှာ Melanin များကို တားဆီးပေးခြင်း၊ Collagen Fiber များကို အားဖြည့်ထောက်ခံပေးထားခြင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေခြင်း၊ အဆီထွက်နှုန်း များကို မျှတစွာထိန်းညှိပေးခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။
အမာရွတ်နှင့်တင်းတိပ်မှဲ့ခြောက်များကို တဖြေးဖြေးခြင်း မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားစေပါသည်။ အရေပြားချောမွေ့နူးညံ့မှုကို ရှိစေပါသည်။ အဆီနှင့်တာရှည်ခံစေသော ဓါတုဆေးဝါးများမပါသောကြောင့် အရေပြားပျက်စီးစေခြင်းမရှိပဲ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက် – ၀က်ခြံမြောက်များစွာ ပေါက်နေသောသူနှင့် ပျက်စီးနေသောအရေပြား၊ ပွန်းပဲ့ရှနာနှင့် sensitive skin များလိမ်းရန်မသင့်တော်ပါ။ လိမ်းနေစဉ်တွင်လည်း မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ အကောင်လေးများပြေးလွားသကဲ့သို့ ခံစားရပါမည်။ စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ အရေပြားတွင်းသို့ လျှင်မြန်စွာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး Treatment ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ – Ethoxydiglycol, Propylene Glycol, Water, l-Ascorbic Acid, Grapefruit extract, Fragrance.
အသုံးပြုပုံ – တစ်စက်မှ နှစ်စက်ထိလိုသလောက်ညှစ်ယူပြီး လက်ချောင်းများဖြင့် အရေပြားတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်နိုင်အောင် အသာယာ နှိပ်နယ်လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ တစ်နေ့လျှင် နှစ်ကြိမ်လိမ်းနိုင်ပါသည်။
Acnes Vitamin Cleanser တွင် အသားအရေအတွက် လိုအပ်သောဗီတာမင်တို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပါဝင်ထားသည်။ အညစ်အကြေးနှင့် ဗက်တီးရီးယားကို သန့်စင်ရုံသာမက ဝက်ခြံပြန်မဖြစ်အောင် တားဆီးပေးခြင်း၊ ကျန်းမာသောအသားအရေဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိပြီး အမာရွတ်များကို တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်စေပါသည်။ ဆဲလ်သေများကိုဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေမဲညစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး၊ တင်းတိပ်မှဲ့ခြောက်များကို လျော့ချပေးသောကြောင့် အသားအရေကို ဖြူစင်ဝင်းပစေသည်။ မျက်နှာအသားအရေကို တင်းရင်းချောမွေ့စေသည်။ ဆဲလ်များကို အားဖြည့်ပေးခြင်း၊ ချွေးပေါက်များကို ကျဉ်းစေခြင်းတို့အပြင် အသားအရေကိုချောမွေ့နူးညံ့စေပါသည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ – Water, Stearic Acid, Gylcerin, Butylene Glycol, Myristic Acid, Palmitic Acid, Potassium Hydroxide, Cocamidopropyl-
Betaine, Lauric Acid, Glyceryl Monostearate, Cocamide DEA, Olea-Europaea (Olive) Oil, Polyquaterium-7, Tocopheryl
Acetate, Niacinamide, Panthenol, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Dipotassium-Glycyrrhizinate, Isopropylmethylphenol,
Disodium EDTA, BHT, Methylparaben, Propylparaben, CI 19140, CI 16035,Fragrance.
အသုံးပြုပုံ – အမြှုပ်ကိုလက်ဖဝါးအတွင်းထည့်၍ ၃၀ စက္ကန့်မှ တစ်မိနစ်အတွင်း နှိပ်နယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ရေများများဖြင့်ဆေးချပါ။
Acnes Foaming Wash 150 ml
အမြှုပ်ပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်သုံးရန်အထူးသင့်လျှော်ပြီး အချိန်ကုန်သက်သာစေပါသည်။ ပါးလွှာသောအရေပြားနှင့် ယားယံသော အသားရေများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပြီး နူးညံ့မှုကိုရရှိစေပါသည်။ Isopropylmethylphenol ပါဝင်သောကြောင့် ၀က်ခြံဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယားပိုးများကို ချွေးပေါက်အတွင်းပိုင်းအထိ ဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးပါသည်။ Dipotassium Glycyrr -hizinate ပါဝင်သောကြောင့် ၀က်ခြံကြောင့်မျက်နှာရောင်ယမ်းခြင်းများးကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အဆီပြန်သောအသားရေများနှင့် ၀က်ခြံမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ချင်သူများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ၀က်ခြံနှင့်အဆီပြန်ခြင်းကို အထူးကာကွယ်ပေးသော မျက်နှာသစ်ဖြစ်ပါသည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ – Water, Cocamidopropyl Betaine, Sodium N-Lauroyl-N-Methyl-β-Aminopropionate, Ethanol, Lauric Acid, Potassium Hydrooxide, Myristic Acid, Polysorbate 60, Palmitic Acid, Octyldodecanol, Isopropylmethylphenol, Dipotassium Glycyrrhizinate, Disodium EDTA, Fragrance, Propylparaben, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Hyaluronate, Sodium Acetylated Hyaluronate.
အသုံးပြုပုံ – Acnes foaming wash လိုသလောက်ညှစ်ယူပါ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ စက္ကန့် ၃၀ မှ တစ်မိနစ်အထိ ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ရပါမည်။ ပြီးလျှင်ရေများများဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ရပါမည်။ နေု့စဉ် နံနက်တစ်ကြိမ် ညနေတစ်ကြိမ် သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
ဖုန်နှင့်အညစ်ကြေးများကိုဖယ်ရှားရန် ကောင်းစွာအထောက်ကူပြုသော နေ့စဉ်သုံးမျက်နှာသစ်ကရင်မ်ဖြစ်ပါသည်။ ချွေးပေါက်တွင်းရှိ ၀က်ခြံများဖြစ်ပေါ်စေသော ဘက်တီးရီးယားပိုးများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့် ၀က်ခြံဖြစ်ခြင်းကို ထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ Vitamin C နှင့် Vita min E ပါဝင်သောကြောင့် အသားရေစိုပြေချောမွေ့မှူကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အသားရေနှင့် အသားရေမညီသောသူများသုံးရန် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ – Isopropylmethylphenol, Dipossium Glycyrrhizinate: vitamin C, Vitamin E Lauric acid, Myristic acid, Palmitic acid,
အသုံးပြုပုံ – Acnes creamy wash ကိုလိုသလောက်ညှစ်ယူပြီး ဦးစွာအမြှုပ်ပြုလုပ်ပါ။ ရရှိသောအမြှုပ်ဖြင့် မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ညင်သာစွာနှိပ်နယ်ပွတ်လိမ်းပါ။ စက္ကန့် ၃၀ မှ တစ်မိနစ်ထိ နိပ်နယ်ပြီး ချောမွေ့သန့်စင်သော အသားရေရရှိရန် ရေများများနှင့်ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။ တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Acnes Pure White Wash
Acnes Pure White Wash မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာသည် အသားအရေကို ရေဓါတ်ဖြည့်ပေးပြီးစိုပြေစေပါသည်။ ၀က်ခြံဖြစ်ခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးပြီး အသားအရေဖြူစင်ဝင်းပစေပါသည်။ Acnes Pure White Wash တွင်ပါဝင်သော သဘာဝအသီးအနှံများမှထုတ်လုပ်ထားသည့် AHAs သည် အရေပြားအပေါ်ယံလွှာရှိ ဆဲလ်သေများကို ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ Yogurt extract (သဘာဒိန်ချဉ်)သည် အရေပြားအောက်ဆုံးလွှာအထိ အားဖြည့်ပေးသည်။ အဆီပြန်ခြင်းကိုထိန်းပေးပြီး ၀က်ခြံဖြစ်စေသော ဗက်တီးရီးယားများကိုသေစေပြီး အသားအရည်ညိုညစ်စေသော Melanin ဓါတ်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေဖြူဝင်းစေသော ဗီတာမင်များစွာလည်း ပါဝင်ပါသည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ – Water , Sodium Laureth Sulfae, Glycerin , Sorbitol , Sodium Cocoyl Glycinate , Potassium Laureth Phosphate , Cocamidopropyl Betaine, Glycol Distearate , Sodium Chloride , PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate , Maltooligosyl Glucoside, Laureth-4 , Hydrogenated Starch Hydrolysate , PEG-7 Glyceryl Cocoate , Silica , Citric Acid , Sodium Lactate , Fragrance , Tocopheryl Acetate, Lactic Acid, Yogurt Filtrate , Isopropylmethylphenol , Butylene Glycol , Formic Acid , Propylene Glycol , Prunus Persica (Peach) Leaf Extract , Rubus Ideus (Raspberry) Fruit Extract , Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract , Ascorbic Acid, Magnesium Ascorbyl Phosphate , Magnesium Chloride , Magnesium Nitrate , Methylisothizolinone , Methylchloroisothiazolinone.
အသုံးပြုပုံ – လက်ဖ၀ါးထဲသို့ လုံလောက်စွာညှစ်ယူပြီး ဦးစွာအမြှုပ်လုပ်ပါ။ မျက်နှာပေါ်သို့စက်ဝိုင်းပုံ ညီညာစွာအသုံးပြုနှိပ်နှယ်ပါ ။ ပြီးလျှင် ရေများများဖြင့်ဆေးချပါ။
Acnes Medicated Body Shower
ဝက်ခြံများသည် အဆီအိတ်များရှိသော ကျောပြင်၊ လည်ပင်း၊ ပုခုံးနှင့် ရင်ဘတ်နေရာတို့တွင် အများဆုံးဖြစ်ပေါ်တက်ပါသည်။
Acnes Medicated Body Shower သည် အရေပြားအတွင်းဆုံးအလွှာရှိ ဝက်ခြံဖြစ်စေသော ဗက်တီးရီးယားများကို သေစေပြီး အ
ဆီပြန်ခြင်းကိုလည်း သက်သာစေပါသည်။ အသားအရေကိုလည်း စိုပြေကြည်လင်စေသောကြောင့် နေစဉ်ပုံမှန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အစွမ်းထက်ပါဝင်ပစ္စည်းများက သင့်အသားအရေကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာ အကျိုးအာနိသင်များကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ရေချိုးပြီးချိန်တွင်
AHA:အဆီပြန်ခြင်းကို လျော့ကျစေပြီး ဝက်ခြံဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။
Isopropylmethylphenol: ဝက်ခြံဖြစ်စေသော ဗက်တီရီးယားများကိုသေစေပြီး အရေပြားဆဲလ်အသစ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
Glycyrrhetinic acid: ဝက်ခြံများကိုသက်သာစေပါသည်။
Vitamin C & Vitamin E: အရွယ်တင်နုပျိုစေသည်။ ချွေးပေါက်များကို ကျဉ်းစေပြီး အစိုဓါတ်ကို ထိန်းညှိပေးပါသည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ – Water, Glycerin, Sodium Cocoyl Glycinate, Laureth-6 Carboxylic Acid, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium
Cocoate, Acrylates Copolymer, Sodium Ascorbyl Phosphate, Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Isopropylmethylphenol, Glycyrrhetinic Acid, Lactic Acid, Sodium lactate, Sodium Chloride, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Potassium Hydroxide, Menthol, Disodium EDTA, Propylparaben, Fragrance, CI 19140, XI 42090
အသုံးပြုပုံ – လုံလောက်သောပမာဏကို လက်ထဲထည့်ပြီးလျှင် ရေဖြင့်သေချာစွာပွတ်တိုက်အသုံးပြုပါ။ အစွမ်းထက်ပါဝင်ပစ္စည်းများကဝက်ခြံဖြစ်ပေါ် ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
၀က်ခြံကြောင့် အသားရေပျက်စီးသွားသောသူများသည် ပုံမှန်အသားအရေရှိသူများထက် ဘာ့ကြောင့် ပို၍ရုစိုက်သင့်ပါလဲ?။ ၀က်ခြံသည် အရေပြားရှိဆဲလ်များကို များစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေပါသည်။ ၀က်ခြံဖြစ်ပြီးပျက်စီးလျှက်ရှိသောအသားအရေသည် တင်းရင်းမှုမရှိခြင်း၊ ကြည်လင်မှုမရှိခြင်း၊ အမာရွတ်များဖြစ်ခြင်းနှင့်ကျန်ရှိနေတတ်ပါသည်။ Acnes Vitamin Cream သည် အရေပြားလျော့တွဲခြင်း၊ ကြမ်းတမ်း၍ မွဲခြောက်ခြင်းများကို ကောင်းစွာဖယ်ရှားပေးနိုင်စွမ်းရှိသော Cream ဖြစ်ပါသည်။ ၀က်ခြံဖြစ်ပြီး ကြည်လင်မှုနှင့် တင်းရင်းလှပမှုပြန်လည်မရရှိမှာကို စိုးရိမ်ပူပန်နေသူများအတွက် အထူးသင့်လျှော်သော Cream ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာသောအသားရေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ရန်အတွက် အထူးလိုအပ်သော Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B3, B5, B6 တို့ပါဝင်သောကြောင့် နူးညံ့စိုပြေ ကြည်လင်လှပပြီး ၀က်ခြံထပ်မဖြစ်ရန် အထူးကာကွယ်ပေးပါသည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ – Squalane, Glycerin, Cyclomethicone and Dimethiconecopolyol, Cetanol, Niacinamide (Vitamin B3), Ascorbyl Glucoside (Vitamin C), Tocopheryl acetate (Vitamin E), Aloe Barbadensis (Aloe) Leaf Extract, Panthenol (Vitamin B5), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6)…….
အသုံးပြုပုံ – မျက်နှာသန့်စင်ပြီးနောက် ခရင်မ်ကို လုံလောက်သောပမာဏကိုယူ၍ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးလိမ်းပါ။ အထူးသဖြင့်ကြမ်းတမ်းပြီး ၀က်ခြံကြောင့်ပျက်စီးသောအသားအရေ နှင့် ညိုညစ်သော အသားအရေများပေါ်သို့ လိမ်းပေးရပါမည်။ အရေပြားတွင်းသို့စိမ့်ဝင်အောင် ညင်သာစွာနှိပ်နယ်ပေးရန်လိုပါသည်။ ညအိပ်ယာမ၀င်မီ နေု့စဉ်လိမ်းခြင်းဖြင့် ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရရှိစေမှာဖြစ်ပါသည်။
Acnes scar care (Sealing scar and dark spot treatment gel)
Gel ပုံစံဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသော Ascorbic Acid Glucoside သည် Vitamin C တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Melanin နှင့် အမဲစက်များကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ ဆဲလ်သစ်များကိုတိုးပွားစေခြင်း နှင့် အမာရွတ်များကိုပျောက်ကင်းစေပါသည်။ အရေပြားတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်မှုအားကောင်းပြီး ကပ်စေးခြင်းမရှိသောကြောင့် Acnes scar care လိမ်းပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာမိတ်ကပ်ကိုထပ်လိမ်းနိုင်ပါသည်။ Allantoin, Vitamin E, Vitamin B6 တို့ပါဝင်သောကြောင့် ဆဲလ်သစ်များကိုလျင်မြန်စွာမွေးဖွားခြင်းဖြင့် ပျက်စီးသွားသောအသားရေများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပါသည်။ ၀က်ခြံကြောင့်ဖြစ်သောအမာရွတ်များကိုလည်း ထိရောက်စွာ ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
အကျိုးကျေးဇူး – melanin, အမဲစက်များ၊ အမာရွတ်များ ပျောက်ကင်းစေပြီ်း ဆဲလ်သစ်များကိုတိုးပွားအောင်လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ – Water, Alcohol, Glycerin, PEG-40, Hydrogenated Castor Oil, Ascorbyl Glucoside, Triethanolamine, Carbomer, Tocopheryl Acetate, Propylene Glycol Alginate, BHT
အသုံးပြုပုံ – လုံလောက်သောပမာဏကိုယူ၍ လက်ချောင်းလေးများဖြင့် Gel ကိုဝက်ခြံအမာရွတ်ရှိသောနေရာပေါ်သို့ ပါးပါးသုတ်လိမ်းပေးပါ။ Treatment ယူနေစဉ် အပြင်သွားပါက Mask ကိုသေချာစွာဖုံးအုပ်ပြီးသွားခြင်းဖြင့် အမာရွတ်နှင့် အမဲစက်ကိုပိုမိုထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
Propionibacteria များကြောင့် ၀က်ခြံများမြုံပြီး ယောင်ကိုင်းကြီးထွားလာခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အဆီမပါခြင်း၊ အရေပြားတွင်းသို့လျင်မြန်စွာ စိမ့်ဝင်နိုင်မှုအားကောင်းခြင်း၊ အရောင်မပါ Gel ပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် စေးကပ်ခြင်းမရှိပဲ သုံးစွဲရလွယ်ကူအဆင်ပြေစေသည်။ Vitamin B6၊ Vitamin E တို့ပါဝင်သောကြောင့် ၀က်ခြံမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပြီး၊ ယောင်ယမ်းခြင်းကိုလျော့ချပေးပါသည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ – Resorcin: 0.4%, Sulfur 2.5%, Stearyl Glycrrhetinate 0.1%, Vitamin E, B6.
အသုံးပြုပုံ – မျက်နှာကိုသေချာစွာသန့်စင်ပါ။ Acnes sealing gel ကို လုံလောက်သောပမာဏခန့်ယူပြီး ၀က်ခြံဖုလေးများပေါ်သို့ တို့ပြီးလိမ်းပေးရပါမည်။ တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်မှ သုံးကြိမ်ထိအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Acnesl Oil Remover Sheets
အဆီပြန်သောအသားရေများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ T zone area တွင် အဆီပြန်သူများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အရေပြားပေါ်မှအဆီများကို ကောင်းမွန်စွာဖယ်ရှားပေးနိုင်သောကြောင့် တစ်နေကုန်သန့်ရှင်းမှုကို ခံစားရစေပါသည်။ မိတ်ကပ်မလိမ်းမီနှင့် မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Acnes oil remover sheets တွင်ပါဝင်သော နူးညံ့သည့် ပေါင်ဒါမှုန့်လေးများကြောင့် အသုံးပြုရာတွင် မိတ်ကပ်ကွက်ခြင်းမရှိပဲ ညီညာဝင်းမွတ်မှုကိုရရှိစေပါသည်။ အသားရေမရွေး အသက်ရွယ်မရွေးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုပုံ- Acnes oil remover sheets ကိုအသုံးပြုပြီး T-Zone area ဖြစ်သည့် နဖူး၊နှာခေါင်း၊ မေးစေ့ နေရာများနှင့် အဆီပြန်သောမည့်သည့်နေရာမဆိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် အဆီပြန်ခြင်းကင်းပြီး သန့်ရှင်းလန်းဆန်းမှုကိုခံစားရရှိရမည်ဖြစ် ပါသည်။
Acnes Washing Bar 75g
၀က်ခြံသည် လူတို့၏မျက်နှာပြင်ုတွင်သာဖြစ်ပေါ်တတ်သည်မဟုတ်ပါ။ ရှာဖွေတွေ့ ရှိချက် များအရ အများအားဖြင့် မျက်နှာပြင်တွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး၊ ကျောကုန်း၊ ရင်ဘတ် နှင့် လည် ပင်းများတွင်လည်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။ Acnes washin Bar သည် ခနာကိုယ်နှင့် မျက်နှာ ပြင်အသားရည် များကို ၀က်ခြံအန္တရာယ်မှအထူးကာကွယ် ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျမ်းမာ သန့်ှရှင်း မှူကို တစ်နေ့လုံး ရရှိစေပါသည်။ အသားရေချောမွေ့ စိုပြေမှု ကိုရရှိစေပါသည်။ Glycosyl Trehalose, Allantonin, Vita min E တို့ပါဝင်သောကြောင့် ၀က်ခြံကြောင့်ပျက် စီးသော အသားအ ရေများကိုလျင်မြန်စွာ ပြန်လည် ကောင်းမွန်စေပြီး အ မာရွတ်များကိုလည်းလျော့ချပေးပါသည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ- Allantoin, Quaternium-73, Sodium Palmitoyl Sarcosinate, Kaolin, Vitamin E, Glycosyl Trehalose, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Titanium Dioxide, Tetrasodium, Edetate, Etidronic Acid, Soap Base, Fragrance.
အသုံးပြုပုံ- စိုစွတ်သောသော အရေပြားပေါ်သို့ Acnes Washing Bar ကို လိုသလောက်ယူပြီး ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပါ။ ပြီးလျင် ရေများများဖြင့် ဆေးချပေးပါ။
Acnes make up remover sheet ကိုနေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ဖုန်၊ အဆီနှင့် အညစ် ကြေးများ၊ ဘတ်တီးရီးယားပိုးများကို သန့်စင်စေပြီး လန်းဆန်းကြည်လင်မှုကိုရရှိစေပါသည်။ Sensitive ဖြစ်သူ များနှင့်လည်း အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ Vitamin နှင့် အသားရေစိုပြေမှုကိုရေရှည်ထိန်းသိမ်းရန် Moisturizer ပါဝင်သော ကြောင့် အသားရေကိုစိုပြေခြင်း၊ သန့်ရှင်းစေခြင်းနှင့် အရေပြားကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ဘတ်တီးရီးယား ပိုးမွားများကို ကာကွယ် တားဆီးပေးခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိစေပါသည်။ Acnes Make up remover sheets ကိုသုံးစွဲခြင်းဖြင့် အသားရေအတွက် အားဖြည့်ကောင်း မွန်သော skin care များသုံးရာတွင်ပိုမို စိမ့်ဝင်မှုအားကောင်းပြီး အာနိသင်ကို 100% အပြည့်ဝ ရစေပါသည်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ- 1,3 Butylene, Glycol, Isoceteth-20, Aloe Extract, Methylparaben, Propylparaben, Ethanol, Fragrance, Vitamin E, Isopropylmethylphenol, Water……
The wondrous world of Rohto Japan